योनीका आकार थरिथरिका : यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ के ? – Saurahaonline.com
योनीका आकार थरिथरिका : यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ के ?
‘‘योनी अत्यन्तै लचिलो, इलास्टिक जस्तो खुम्चने र तन्कने क्षमता भएको अंग हो । यो आफ्नो ठाउँमा टेम्पोनलाई अड्याएर राख्न सक्ने गरी सानो हुन सक्छ भने एउटा सिंगो बच्चालाई त्यसबाट पार गराउन सक्ने गरी फैलिन सक्ने पनि हुन्छ ।
“योनीको आकारप्रकार अनि समयक्रममा यो परिवर्तन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुराबारे चिन्ता लिनु वास्तवमै गलत हो”, ओ कोनोर भन्छन् । उनका अनुसार, ूयोनीको आकार प्रकारभन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा आउने स्राव, जागृत हुने यौन उत्तेजना र आफ्ना पार्टनरसँगको राम्रो सम्बन्धले महिलाको यौनआनन्दमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ ।